कसरी एथेन्समा उत्कृष्ट दिनहरू2खर्च गर्नुहोस् सडकको लागि एक युगल
एथेन्समा2सही दिन कसरी बिताउन
जुलाई 14, 2019 / एक टिप्पणी छोड
यदि तपाईं इतिहास प्रेमी हुनुहुन्छ र कम से कम एन्टिन्समा2दिनहरू छैन - ग्रीस - तपाईलाई हराउनु भएको छ। ग्रीसको पुरातन राजधानी शहर एक अवशेष र एक संपन्न महानगरीय दुवै छ, अद्भुत, आकर्षक मान्छे, स्वादिष्ट भोजन, एक हलचल रात को जीवन संग, र तपाईं भन्दा पनि संभवतः कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।
तथापि, तथापि, एथेंस कोही कोही जम्पिङ अफ पोइन्टको धेरै ग्रीक टापुहरूमा क्रूरको लागि हेरिएको छ जुन सोशल मिडिया संचालित यात्राको हाम्रो युगमा धेरै लोकप्रिय भएको छ। केहि Instagram योग्य योग्य Santorini (जो साँच्चै हास्यास्पद छ), वा पार्टी स्थान Mykonos मा अधिक रुचि छ। सायद त्यो तपाईंको यात्रा कार्यक्रम हो, जुन ठूलो छ। तथापि, एथेन्समा2दिन व्यतीत गर्न तपाईले साँच्चिकै आफैलाई ऋण दिनुहुन्छ यदि तपाईं एक इमर्सिभ, चौंकिलो यात्रा अनुभव चाहानुहुन्छ।
एथेंसमा रहँदा साँच्चै निर्भर छ कि तपाईं कहाँबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। संयुक्त राज्यमा हामीमध्ये उनीहरूलाई रोममा उडान गर्न सम्भावना बन्द हुन्छ। एथेंस एकदम अलग भौगोलिक रूपमा छ, जो सेनामा शहरको शक्तिको भाग थियो जुन केहि 3,000 वर्ष पहिले थियो। तपाईं प्रायजसो ईजियन एयरलाइन्स मार्फत उडान गर्नुहुनेछ।
शहरमा पुग्न सजिलो विकल्पहरू छन्, तर सजिलो र सबै भन्दा सजिलो निःशुल्क ट्याब लिनको लागि हो। ड्राइभर धेरै छन्, र चालक चालक हामी अविश्वसनीय रूपमा राम्रो र धेरै सहयोगी थिए। उहाँले हामीलाई शहरको बारेमा महान सुझाव दिनुभयो, हामी हामी (प्लाका) मा बसिरहेका थियौ, र भाडा मात्र दुईजना मानिसहरूको लागि $ 35 USD थियो।
एकपटक तपाईं एथेन्स प्रवेश गर्नुभएपछि, तपाईं आफ्नो टैक्सीबाट लैजान चाहनुहुन्छ। भित्ताहरू शहरको केन्द्र नजिकको प्रत्येक सडक कोनेमा लगत्तै उभिएको छ, र तपाईं आफ्नो शहरमा आफ्नो विरासतलाई कारवाही गर्न चाहानुहुन्छ जुन यति धेरै तयार छ।
एथेंसमा कहाँ रहन: प्लाका
एथेंसमा रहन सबै भन्दा स्पष्ट स्थान यो क्षेत्र "परमेश्वरका छिमेकी" - प्लाका भनिन्छ। यो जिल्ला, एक सुन्दर र विचित्र क्षेत्र संग धेरै गर्न को लागी, चट्टानी चट्टान को पैदल मा स्थित छ जो महाविद्यालय को तल ट्रेल्स छ। यहाँबाट, त्यहाँ धेरै पसलहरू, रेस्टुरेन्टहरू छन् र निस्सन्देह, एक महाकाली, आफ्नै।
प्लाका बारे सबै भन्दा राम्रो चीजहरूमध्ये यो एथेन्समा खाना खाने सबैभन्दा राम्रो स्थान हो। खाना बस अविश्वसनीय छ, कुनै कुरा हो कि तपाईं एक foodie हो, ठीक भोजन को एक सच्चा अभियंता, वा एक यात्री एक रात मा एक महान पेय खोज्दै। हाम्रो एक मनपर्ने लियियोडी पारंपरिक ग्रीक भोजनालय हो, जुन प्लाङ्गमा स्थित छ, केवल एक महानगर संग्रहालय बाहिर।
यस क्षेत्रमा पप-अप र किफायती रेस्टुरेन्टहरू क्लासिक ग्रीक मनपर्नेहरू सेवा गर्छन् - spanakopita, dolmades, gyros, र हाम्रो पसंदीदा - falafel tzatziki संग। यो एथेंसमा सबै सामान्य भोजन हो, र यो वास्तवमा तपाईंसँग यो प्लाकमा कहाँ फर्किएको कुरा होइन - यो राम्रो हुन जाँदैछ!
हामी प्लाक को बारे मा एक अन्य चीज हो कि यो किफायती छ। रोमन अगोराबाट केवल केहि कदम टाढा रहेको छ, हाम्रो मनपर्ने होटल हो प्लाका होटल, जुन प्रति रात लगभग $ 50 USD छ। यो तपाईंको विश्राम केन्द्रको लागि एक उत्कृष्ट ठाँउ हो, र यसले तपाईंलाई अन्य महान स्थानहरू जस्तै मोनास्टिरैकी र सिन्टग्राम स्क्वायरको पहुँच प्रदान गर्दछ।
दिन 1: प्राप्त एथेंस मा हरायो
तपाई एथेन्समा आफ्नो2दिन यात्रा कार्यक्रम सुरु गर्न चाहानुहुन्छ प्राथमिक रेखा शहर - यसको इतिहास। शहर ती दुर्लभ रत्नमध्ये एक हो, शायद संसारमा केवल केहि नै, त्यो कला, सुन्दर मौसम, महान खाना, इतिहास, र यस्तो उदार स्तरमा महान व्यक्ति छन्।
द ओल्ड्रोपोलिसमा इतिहास
एप्रोपोलिस एक पुरातन गजल हो जुन एथेंसको मध्यमा उच्च छ। Acropolis, जुन ग्रीक मा "उच्चतम बिन्दु" को अर्थ हो, यो एक शब्द हो कि यस स्थान को खूबसूरती देखि शहर को केन्द्र मा कहीं पनि दिखाई दिछन, र एथेंस को विगत बीकन को रूप मा यसको मूर्ति, मन्दिर, खंडहर र आश्चर्यजनक वास्तुकला संग खडा छ।
यो यूनानी राजदूत पेरिक थियो जसले एप्रोपोलिस डिजाइन र अवधारणा गर्यो, जसका खंडहर र ढाँचाहरू विश्वव्यापी रूपमा प्रतीक छन्। संरचनाहरु को नाम सर्वोच्च - ईचेथम, प्रोपेलाय, द पार्टेनसन, पेरिक ओडेन, दियोनीसियस थिएटर, र एथेना को मंदिर। यी संरचनाहरूले समयको प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन मानिसको बुद्धि केही प्रवाहित चरणबाट विस्फोटिरहेको थियो।
एक्रोपोलिस मा पहाड को किनारा मा 21 प्राथमिक ऐतिहासिक अवस्थित हो, जसमध्ये यिनी दुनिया को सबै भन्दा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक र पुरातात्विक ढांचे को बीच मा विचार गरिन्छ। चलिरहेको पुनरुत्थान कार्य धेरै संरचनाहरूमा जारी छ, जुन भविष्यका अगुवाहरूका लागि यो पहाडको बहाव सुरक्षित गर्न खोज्छ।
Panathenaic स्टेडियम, आफ्नो मूल निर्माण मा, एक प्राचीन दौडको साइट मा 330 बीसी को आसपास Lykourgos द्वारा बनाईएको थियो। निर्माणको लागि मूल उद्देश्य थियो प्यानेनाजेनिक खेलहरू, र संगमरमर संरचना मा आज यो 144 एडी द्वारा पुनर्निर्माण गरियो। ईश्वरवादको सम्बन्धमा ओलम्पिक सम्बन्ध र ईसाईयतको वृद्धि बढ्दै गयो, स्टेडियम 1870 मा Zappas ओलम्पिक को लागि उत्खनन गर्नु पहिले नै भूल गएको थियो।
1896 मा Panathenaic स्टेडियम मा पहिलो आधुनिक ओलम्पिक
यो एथेन्समा एक अविश्वसनीय कुरा हो, यस्तो लामो र भण्डारी इतिहासको साथ जो हाम्रो प्रत्यक्ष संसारसँग जोडिएको छ। स्टेडियमले उद्घाटन समारोहको साथसाथै पहिलो आधुनिक ओलम्पिकको लागि समापन समारोह सञ्चालन गर्यो, जुन 1896 मा आयोजित गरियो। यो मूल खेल प्रतियोगिताको4को साइट पनि थियो।
स्टेडियम कला को पूर्ण काम हो, र एक प्राथमिक ढांचे मध्ये एक थियो रोमन कोलिजियम को लागि एक सच्चा प्रेरणा हो, र बारी मा आधुनिक स्टेडियम भवन र निर्माण को बाकी मा।
आज यो स्टेडियम जस्तो देखिन्छ कि यो 10 वर्ष पहिले - 2,000 को सट्टा बनाइयो!
एप्रोपोलिस संग्रहालय भ्रमण गर्नुहोस्
यो हामी सबै भन्दा सुन्दर संग्रहालयहरु मध्ये एक हो। पार्थिनेन को फ्रिजर रिलीजहरु अनुहार को दूरी मा छ, र कोठाहरु लाई प्राकृतिक यूनानी कला को अलबास्टर को बिरुद्ध प्राकृतिक रोशनी संग भर दिए। हामी केहि फोटोहरू खिचेका छौं, तर बढी प्रभावकारी कामहरूमध्ये एक वास्तवमा विनाश संरचना हो जसमा संग्रहालय बनाइएको थियो - 3,500 वर्षको उमेरमा एक ढाँचा!
यो भ्रमण गर्न पूर्ण छ एप्रोropolिस संग्रहालय। प्रवेश धेरै सस्ती छ, र यो वास्तव मा एकदम महाकाली सम्म पैदल माथि पहाड तल स्थित छ। रेखाहरू लामो हुन सक्छ, त्यसैले यो भन्दा राम्रो छ कि तपाईंको टिकटको समय भन्दा अघि खरीद गर्न वा - त्यहाँ त्यहाँ त्यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ!
Syntagma स्क्वायर मा परंपरा मनाते हो
हजारौं वर्षदेखि इतिहासको सन्दर्भमा मानिसहरूले युनान र एथेंसको इतिहासलाई अक्सर सोच्न थाले तापनि केही गुमाएका युवतीका पातहरूद्वारा प्राचीन ज्ञानले वास्तवमा इतिहासको धेरै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भागहरू गरेका छन्। Syntagma स्क्वायर एउटा स्थान हो जसले यी एपको सम्मान गर्दछ।
टेलिभिजन व्यवसायको 300 वर्ष भन्दा बढी पछि, नयाँ, स्वतन्त्र ग्रीसको सिर्जना प्रतीक गर्न 1833 मा सिन्थगामा स्क्वायरमा निर्माण गरिएको थियो। Syntagma, अर्थ संविधान ग्रीकमा, एथेनियन बलको प्रतीकको रूपमा उभिएको छ।
आज, पर्यटक र एथेन्सियनहरूले "प्रत्येक गार्ड" परिवर्तनको अवसरमा हरेक दिन यो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना मनाउने गर्दछ। एक पुरातन परम्परा होइन तापनि, आज एक स्वतंत्र देशमा एथेन्सको स्थापनाको लागि समान महत्त्वपूर्ण छ।
दिन 2: अनुभव एथेंस 'विम्बन्ट आधुनिक संस्कृति
आज एथेन्स एक दृढ ठूला शहर हो जुन अचम्मको चीज गर्न को लागी, मजेदार चीजहरू हेर्न, स्वादिष्ट भोजन, र गहिरो संस्कृतिको शहरको वरिपरि गहिरो संस्कृति संग। तपाईं एथेंसको गहिरो इतिहास को बाहिर शहरमा यति सजिलो हराउन सक्नुहुनेछ। एथेन्स एउटा शहर हो जुन समयको साथ मात्र राम्रो हुन्छ।
प्लाकको सुन्दर हिल्स ट्रोल गर्नुहोस्
प्लाका एक राम्रो कारणका लागि देवताहरूको छिमेकीको रूपमा चिनिन्छ, एथेन्सको शहर केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक क्षेत्रले एक्रोपोलिस राख्ने चट्टान माउन्टको तलल्लो भागमा छ।
सबै एथेंसमा, वास्तवमा, यो साबित भएको छ कि शहरको एडीएन्डी स्ट्रीट - सिधा सिधै प्लाकाबाट चल्छ। वास्तवमा, यो अझै पनि उच्च ट्राफिक क्षेत्र एउटै लेआउटसँग भएको छ जुन पहिलेको पुरातनता संगै भेटिएको थियो। पसलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, बारहरू, पिसा बजारहरू, ताजा बजारहरू र अरूले एड्रियनउलाई प्लाकामा टहल गर्न ठूलो ठाउँ बनाउँछन्।
एथेंसले सडकमा नृत्यको उत्कृष्ट इतिहास छ जुन एक्सएनएनएक्सक्स वर्ष पछि जान्छ, जब एक जोडीले पियरोस स्ट्रीट नजिकै नजिकै पोर्टेबल स्टीरियो ल्याए र नृत्य सुरु गरे।
अरूले पछ्याउँदै र भेला भएका भीडहरू, परम्पराले चिसो र विस्तार गरे, सोमवारको आजको "स्ट्रीट नृत्य मुगाङ्गो" को परिणामस्वरूप। यो सबै उमेरको उमेर हो, जुन परिवार, युगल, मितिका लागि आदर्श छ र व्यावहारिक रूपमा!
शाम को आकाश मा सिनेमा हेर्नुहोस
एकअर्काको महान कुरा निश्चित रूपमा निश्चित रूपमा आधुनिक अनुभवको हो जुन एथेन्स सिइन योइओ हो। 1935 मा पहिलो सुरुवात, यो खुल्ला वायु सिनेमा एक शहरमा सबै रोमान्टिक चीजहरू मध्ये एक हो, र वास्तवमा केहि कुरा हो जुन तपाइँ आफ्नो2दिन एथेन्स यात्रा कार्यक्रममा फिट गर्नुपर्छ।
न केवल उनीहरू पिकनिक र शीतल पेय जस्तै सामान्य उपचार प्रदान गर्दछ, तर तपाईं केही थप पारंपरिक यूनानी भाँडा पनि जस्तै शराब, माछा राइ, र सुपर मसालेदार चिनियाँ चिनियाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
एउटा ठाउँ खोज्न चाहानुहुन्छ जुन पुरानो हो? 1920 मा खोलिएको सिइन पेरिस, महाप्रबन्धकको अद्भुत दृश्यको साथ अर्को उत्कृष्ट आउटडोर सिनेमा हो!
हामी सबै एथेंसमा सबैभन्दा बढी मन पर्ने स्थानहरू मध्ये मोनास्टिरिकी छ, जुन वास्तवमा मोनास्टिरिकी जिल्लामा प्लाका को किनारामा स्थित छ। यो पङ्क्तिहरू र पसलहरू, पङ्क्तिहरू, शिल्पहरू, गहना भण्डारहरू, र थपका साथ एक उत्कृष्ट स्थान हो। साथै - हाँ, तपाईंले यसलाई अनुमान गर्नुभयो - खाना अद्भुत छ!
यो विक्रेताहरूको लागि, जोडिहरू, कलात्मक प्रकारका लागि र खाद्यान्नका लागि एक उत्कृष्ट ठाउँ हो। थप रूपमा, यो साँच्चै सुन्दर र विचित्र छ। तपाईं तिमाहीमा सबै दिन टहल गर्न सक्नुहुन्छ!
मोनास्टिरकीमा बार क्रल
Monastiraki एक ठाउँ हो जुन दिनको समयमा कला प्रेमी र खाद्यान्नको लागि उत्कृष्ट स्थानको रूपमा चिनिन्छ, तर सूर्यको रूपमा यो एक जीवंत क्षेत्र हो जसले ठूलो सलाखहरू र भव्य ककटेलहरू भरिएको छ!
Monastiraki बस सलाखों, बिस्ट्रो, र बाहिर बस्न को लागि भयानक स्थानहरु र एक पेय देखि भरा छ। हाम्रो मनपर्ने ठाउँ स्पल्लोती थियो, जो एथेनदेस मा चर्च सेन्ट आइरन को दाहिने तिर स्थित थियो। यो मिक्सोलोजी बार हो, तर खाना राम्रो छ, र यो शहर को एक अस्थिर भाग मा छ।
Monastiraki को आराम, idyllic दिन वाला माहौल रात मा आउँछ जब एक अस्थिर, जीवंत मानव को मार्ग दि्छ। यो यहाँ छ जब दर्जन हिप र स्टाइलिश बिस्ट्रो, सलाखहरू र रेष्टुरेन्टहरू स्विङले आफ्ना ढोकाहरू खोलिन्छन्, मोनास्टिरिकी एथेन्समा बार-हप गर्ने सबैभन्दा राम्रो ठाउँ बनाउँछ। ZAF कैफे, कविता 'Crimes कला बार, र धेरै स्थानहरू जुन कला, रचनात्मकता र आनन्दको एथेनियन आत्मामा खेल्छन्, सहित पेय गर्नका लागि उत्कृष्ट ठाउँहरूको एक टन हो।
यदि तपाईं एथेन्स शहरको चमक र प्रतिभा अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ, मोनास्टिराकीको अचम्मको मनोभाव महसुस गर्नु हो जुन तपाईले पुरा गर्नु पर्छ!
श्रेणी: युरोप, ग्रीस, यात्रा कार्यक्रम, यात्रा योजना टैग: एथेंस, greece, यात्रा कार्यक्रम, यात्रा योजना
← चिन्ता फ्रा Diavolo
न्यू इंग्लैंड क्लम चावडर →